Fampisehoana vaovao an'ny keyboard QuickType ho an'ny iPad ao amin'ny iOS 9 | Vaovao IPhone
Ny zazalahin'ny paoma voakaikitra dia nihetsi-po mafy nanolotra iOS vaovao misy endrika vaovao maro. Izany no antony ahazoan'ny keyboard an'i QuickType an'i Apple fampiasa manokana an'ny iPad ao amin'ny iOS 9, ao anatin'izany ny "bara hitsin-dàlana" miaraka amin'ny rohy haingana amin'ireo fiasa fampidirana lahatsoratra toy ny fanapahana, kopia, apetaho ary endritsoratra. Ireo fiasa vaovao ireo dia manampy amin'ny fanatsarana ny fifandraisan'ny iPad sy ny fampiharana anao.
Rehefa manavao ny iOS 9 isika dia ho hitantsika fa ny sary miendrika fanapahana, kopia ary mametaka dia hita eo ambonin'ny keyboard iPad, eo ankavanan'ny soso-kevitra momba ny teny Quicktype. Ireo kisary ireo dia tonga amin'ny toerana misy anao ao amin'ny iOS 9, mamela ny fidirana haingana rehefa manoratra. Amin'izany i Apple dia manamora kokoa ny mifidy sy mamindra lahatsoratra amin'ny klavier ao amin'ny iOS 9. Amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa amin'ny rantsan-tànana roa amin'ny kitendry, ny rafitra dia hisafidy ho azy ny teny amin'izao fotoana izao izay ametrahana ny cursor, fa " paompy telo "dia hisafidy ny fehintsoratra amin'izao fotoana izao.
Avy eto, ireo mpampiasa dia afaka mampiasa ny fanapahana, ny fandikana na ny fametahana avy amin'ireo sary masina eo an-tampon'ny ankavanan'ny fitendry, ary koa ny fanovana lahatsoratra nefa tsy mila mandehandeha ny sahan-dahatsoratra. Amin'ny fampiharana sasany, Apple koa dia manana kisary fanampiny hita eo ankavanan'ny bikan'ny tolo-kevitra QuickType.. Ohatra, ao amin'ny Apple Pages, ny sary famantarana matevina, italiana ary tsipika dia aseho hampiasainao, raha toa kosa ny lisitry ny mailaka dia manana làlana hitsin-dàlana mety amin'ny fametahana rakitra.
Ny hitsin-dàlana dia samy hafa kely amin'ny fampiharana Apple's Notes, izay amboarina, kopia ary apetaho dia atambatra ho kisary scissor tokana. Io dia mamela toerana ho an'ny bokotra lisitra iray ary bokotra loharano iray (mampiseho fomba maromaro). Ary farany, ao amin'ny naoty, ny sary masina ampidirina ny sary na sary dia eo ankavanan'ny soso-kevitra Quicktype.
Apple koa dia nieritreritra a Fanohanana ireo hitsin-dàlana fitendry aminà rindrambaiko an'ny antoko fahateloMiaraka amin'izany, ny mpandrindra dia afaka mampiditra hitsin-dàlana amin'ny fampiharana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Ianaro ny momba ny fiasa vaovao an'ny keyboard QuickType ho an'ny iPad ao amin'ny iOS 9
Ny Camera + dia havaozina ho an'ny iOS 9 sy ny 3D Touch vaovao
Ahoana ny fomba hizarana sary mivantana amin'ny iOS 9